-दुर्गा अधिकारी भमरकोटे ।
जिवनको लक्ष के हो? निश्चित हुनु पर्यो ।
पढ्ने लेख्ने कक्ष के हो? निश्चित हुनु पर्यो ।
पोष्ट विना फुटबलमा, गोल कसरी हुन्छ,
बोल्ने सोध्ने पक्ष के हो? निश्चित हुनु पर्यो ।